रेखाले लगाउने यो सिन्दुर कसको नामको हो ? रहस्य थाहा पाएर पर्नुहुनेछ चकित् – Khabaarpati
October 7, 2020 goodmamLeaveaComment on रेखाले लगाउने यो सिन्दुर कसको नामको हो ? रहस्य थाहा पाएर पर्नुहुनेछ चकित्
रेखाले लगाउने यो सिन्दुर कसको नामको हो ? रह
काठमाडौ । एक्लो हुँदाहँदै पनि रेखाले आफ्नो सिउँदोमा कस्को सिन्दुर लगाउँछिन् त ? यो प्रश्नको जवाफ सबैले जान्न चाहिरहेको बेला यतिबेला उनको सिउँदोको सिन्दुरको रा’ज बाहीरिएको छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो रेखा र अमिताभ बच्चनको अधुरो प्रेम कहानीको बारेमा । यी दुई एकअर्कादेखि अलग त छन् तर पनि माया भने सधैं एकअर्कालाई नै गरिरहे । यी दुईको प्रेम कहानी आकाशमा चम्किरहने तारा जस्तै तेजीलो छ । यी दुवैले आफ्नो प्रेमलाई अमर राख्नकोलागी आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका सकारात्मक निभाई रहे ।
उनले सिन्दुरको विषयमा प्रश्नकर्ताले तपाईँ कसको नामको सिन्दुर लगाई रहनु हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा रेखाले मुस्कुराउँदै भनेकी छन्,‘यो त जो कसैले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ । यो पनि कुनै सोधिन प्रश्न हो र रु’ रेखाको यही जवाफलाई बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनसंग जोडिएको छ । किनकी अमिताभपछि रेखाको जीवनमा अरु कुनै व्यक्तिले प्रवेश पाएन । रेखाको भनाईमा धेरैले प्रतिकृया दिएका छन् ।
पहिरोले घर भ’त्किँदा महिलाको मृ’त्यु